11 UCanzibe 2017
Isidingo seHora kwi-"Industry Industry" - i-CISCO
Icandelo le-IT libe yimiqathango phakathi kweentlobo ezininzi emva kwoshishino ngenxa yokuthakazeliswa kwayo ngokubanzi, ukuxhaswa, ukujonga kunye nenkcaso. Imfuno yeemeko zokuhlala, ukuphuhlisa nokuphucula kwi-IT ishishini lenze ingcamango yokuba "Ukunxibelelana" kunye nokuphuhliswa ngokukhawuleza, kunye nokuqhubela phambili kwi-"Networking" kuye kwavelisa "iingcali" kule ndawo. Ngomdla omkhulu kakhulu kule ngcali kunye ne-kilter ukufikeleleka kwabo lula nokunyuka, kubangel 'umdla "abaPhezulu abaCwangcisiweyo". Namhlanje, kwanokufikeleleka kweeNgcali ezilungiselelweyo akuzona zonke iingxaki, kwaye imfuno ebaluleke kakhulu ishintshile kwi "Professional Professionals" eziqinisekisiweyo kwii-hardware ezithile, iinkqubo kunye nemisebenzi. Ukuvuma kwale "AbaQinisekisiweyo abaPhezulu" kubangelwa indlela abayilungisile okanye abaqinisekisileyo ngokukhawuleza, i-commonsense kunye neenkqubo zokunxibelelana ezinxulumene nemarike yakutshanje. Ukuqinisekiswa ngokujulile kwezi "Abaqeqeshi Abaqinisekisiweyo" yibo baqinisekiswa kwi "CISCO" .. !!
Kutheni ukuba iCISCO Certification ibe "ehloniphekileyo"?
CCNA Certification okanye CCNA Training
I-CISCO iyinkosi ye-"Industry Industry" kwaye kwithuba elihle lokuba uqinisekisiwe okanye unikwe ngumlawuli ngokucacileyo uphendukela kwi "Men of King". Zonke izinto ezicatshangelwayo, le sizathu esinye nangona kunjalo inyaniso kukuba iCISCO eqinisekisiwe iingcali zinokuqonda ngokugqithiseleyo kunxibelelwano lwewebhu, izinto, amanxibelelwano amaninzi ahambelana ngokusingqongileyo kunye nendlela ebaninzi ngayo izinto kwi-intanethi, Inkqubo ye-bioloji yehlabathi jikelele yanamhlanje, ivela kwiCISCO. Namhlanje i-CISCO yindlela engummangaliso, engenakuguquka, obungqina obungabonakaliyo, obungqina bonke kwi-yorhwebo. Inika iimpendulo kubaxhasi begadget edibeneyo kumanethiwekhi amaninzi ukuya kumanyano ongenamandla, ukwenza ufikeleleko kunye nokutshintshisiswa kwedatha phakathi kwabantu abalula, kungakhathaliseki ukuba ziintlobo ngexesha, indawo kunye nezigaba. I-CISCO idlulisela izigqibo ezinxibelelwano zokugqibela zee-network, ezenza isakhiwo esifanelekileyo sinikeze ukulawulwa kweenethiwekhi eziqikelelweyo. Kuze kwanikezela iindidi ezininzi zezinto zokusebenza ukuze kuqinisekiswe yiCisco Workwork System Software. Esi sizathu sokuba usebenze kunye nemibutho icela inzala yongcali eqinisekiswa yiCISCO oko kukuthi "iCCNA Certification". Uqeqesho lwe-"Cisco Certified Network Associate" luyimpendulo yanamhlanje ukunikezela ekuqhutyweni kwintetho yakho yokunxibelelana.
Kuyathakazelisa kakhulu ukuphanda indlela kunye nexa i-CISCO yavela njani ukuba yinto enamandla kakhulu kwi-intanethi. Ibuyela emuva kwi-1980 xa uLen Bosack noSandy Bosack, bobabini basebenza kwiiofisi ze-PC eziqhelekileyo kwiYunivesithi yaseStanford benza umncedisi apho ii-PC zabo zikwazi ukuthetha omnye nomnye usebenzisa i-intlanganiso ye-IP. Kwi-1984 baqulunqa "iinkqubo zeCisco" kwaye kamva kwi-1992 igama latshintshelwe "kwiCISCO Systems, Inc.". Ngelo xesha benza ambalwa "AbaSebenzi bePortal" namhlanje ebizwa ngokuthi "i-Old Alphabet Soup Products" njenge - AGS; MGS; CGS; IGS kunye ne-AGS +. Ngaphakathi konyaka i-CISCO ibonise ukutshintsha kwe-4000, 7000, 2000, kunye ne-3000 yokutshintsha. Ngaphambi kokuba i-CISCO ingakaphenduli ibe yintlangano enomdla kakhulu kwaye ifuna inzululwazi yezobuchwepheshe kwiinkampani zokunxibelelana. Oko kwavelisa olunye uhlobo lokuvavanya kubo, zeziphi iindlela zokubakhokela kuzo kumanqanaba athile kunye neendawo. Ukuba nezixhobo ezinzima kunye namalungiselelo afuna abasebenzi abanolwazi ukuzisa, ukujongana nokuphanda. Impendulo efanelekileyo yafika - i-Cisco Certified Workwork Expert (CCIE) program. Injongo yayisisiseko - inani elongezelelweyo lezixhobo eziza kuqaliswa zifunyaniswe iingcali ezinolwazi ezinokuthi zenze okufanayo ngaphandle kokunyamekela nokuphanda xa zifunwa. Le nkqubo ilungiselele iingcali eziza kuthatha zonke ezi zinto kwaye ziyenze njengoko zifunwa. Inkqubo yaqinisekisa abantu kumanqanaba ahlukeneyo okukwazi ukulawula, ukucwangciswa kwezicwangciso zokunxibelelana kunye nokukhuthaza ngokulandela iindlela zokuvula kubo bonke, okwakunyanzelekile ukuba kubekho isibini. "I-CCNA isitifiketi" yinyathelo lokuqala okanye ungabiza ngokuthi "ilitye lokungena" kweli lungiselelo.
I-CCNA Certification yi-certified mandatory kunoma yimuphi umntu onxibelelwano olunxibelelwano olufunekayo ukuba abe nguCISCO. Zonke ezinye izatifikethi zithatha emva kwesi siqinisekiso esisisiseko. Izinzuzo zokuba yi-CCNA Certified / Certified are many, ukuluhlula isibini -
Iibutho zifumana ilungiselelo lokukwazi ukulinganisa izakhono zengcali onokukwazi ukujongana nomkhumbi ngokufanelekileyo kwiindawo ezixhomekeke kuzo. Bayawugcina loo mgangatho wokukhetha umqhubi.
Abantu ngabanikezwa ngamakhono okubeka ukuqonda, ukuzisa nokujongana neCisco Systemwork Operating System kunye neCisco. Ngaphezu koko, iinqutyana kunye neebhontshi ze-intanethi zenziwa ngokulandelelana ngenjongo yokuba zihamba ngeemeko ezingekho "i-Non-Cisco".
I-CCNA yoqeqesho iya kukunika isiteji apho i-CCNA Certification yakho ijika ibe yiplati yokufumana umsebenzi ofezekileyo kunye nohloniphekileyo.
I-CCNA I-Certification yakho iya kuxhomekeka ekuncedeni ukuba wolule ngaphaya kweengcali zengxabano, kwimibutho yangaphakathi nangaphandle.
Uyaphumelela ngokucacileyo ukufumana izatifikethi ezithengiswayo, xa u-CCNA uqinisekisiweyo, njenge-CCNP (uCisco Certified Network Professional); ICIE (Cisco Certified Workwork Expert) ICCDA (iCisco Certified Design Certification) kunye neCCDP (uCisco Certified Design Professional).
Uthathwa njengomnatha wokunxibelelana, ubuchule, kwaye unengqiqo ekunqumeni ukuxinwa kweenethiwekhi okanye ukubiza amanqanaba amanqanaba.
Ukuvuma okuphakamileyo, njengendlela yokunxibelelanisa inethiwekhi, i-CCNA Certification xa iphikisana nayo nayiphi na isatifiketi ngokufanayo isenza ibe yinjongo yesizathu. Uyakuthandwa kungakhathaliseki ukuba unako ukuba unamava ahlukeneyo amava kwongezwe kwi-repertoire yakho.
Kodwa kufuneka ukwazi malunga nezixhobo eziphambili omele uzuze ukufumana i-CCNA Certification okanye i-CCNA yoqeqesho.
Esi sihamba kunye nesibini esilungileyo kufuneka ube nayo-
Ukuqonda i-LAN esisiseko, i-WAN kunye ne-LANE amanethiwekhi, ukusekwa, ukusekwa kunye nendlela yokusebenza ngayo.
Lungiselela okanye uqalise inethwekhi kunye neenkonti kunye neebhanti ze-IP, i-IPX, i-Frame Relay, i-Ethernet ne-VLAN.
Ukulahlekelwa kwemali kwiindawo ezikude, ukufunda kwezicelo ezinjengeentengiso ze-intanethi, imidiya yokusebenzisana, njalonjalo.
Ufanele ufumane ukuqeqeshwa kwe-CCNA ukususela kwisiseko abaye baphumelele ngokufanelekileyo kwaye bakwenze ukuba ufumane iimfuno eziphezulu zolwazi ngokwakha isicwangciso esilungileyo sokukubonisa ekuphuculeni ukucwangciswa kwenethiwekhi, ukujongana nokunxibelelana kwiimeko ezifanelekileyo kunye nokuvavanya, kunye nendlela yokusebenza zokunxibelelana. Kufuneka ulungelelaniswe ukuba kufuneka imfuno yombutho ngamakhono akhethekileyo. Ufanele ufumane ulwazi olusisigxina lwezakhono ezizodwa, amaqhinga kunye nokuxhotyiswa kwamandla okulawula ukuhambisa kakuhle amandla xa unamava ngaphakathi kwimeko efanelekileyo. Ufanele ufumane umrhumo ofikelela kude kwiCisco ukuhamba kunye nezifundo zokuguqula iziqinisekiso. Zimbalwa zezihloko ezibalulekileyo omele uzizi -
Iimodeli ezihlambulukileyo kunye nokukhethwa kwazo
Umzekelo we-OSI kunye neemeko ezifanelekileyo
Iingqimba ezisixhenxe ze-OSI
Isixhobo sokulawula umgca wezothutho
Ulawulo lokuhamba kunye nedatha
Cisco utshintshe izinto
I-LAN Ukutshintsha phambili, Ukuguqula iintlobo kunye nokusebenza kwabo kunye noTshintsho lwe-2
IP Technologies Routing and Process
Umsebenzi we-Intanethi kunye nokulawulwa kwayo
I-Novell IPX kunye nokuyila kwayo
Iinkonzo zeziseko, ukhuseleko kunye nokulawula
Ukukubeka ngokucacileyo, injongo kufuneka ibe kukufunda i-LAN nge-switches ehlukeneyo, ukujongana ne-VLAN, ukuyila i-OSPF kunye ne-EIGRP, isebenze ngamanethiwekhi enethiwekhi, inzuzo yefu kunye nokuphangela ubunzima beethungelwano ukwenzela ukuba kube lula ukusebenza kwenethiwekhi.
I-CCNA ukuqeqesha ngokusungulwa kunye nokwaziswa kunye neyona nto into omele uhambe ngayo kwaye ukhethe. Imibutho efana ne "KOENIG Solutions" ezona zifanelekileyo kwiikhosi ezizodwa zokuqeqesha kunye nezitifiketi zokufumana izithemba, ukuxhomekeka, kunye neengcali, kuzo zonke iinkqubela phambili zokunxibelelanisa ezifunekayo ngokubanzi. Baneengcali ezingaphezu kwe-300 eziqinisekisileyo eziyingcali kwiindawo zabo. "I-KOENIG Solutions" zijongwa njengamavulindlela ehlabathini lonke ekuxhumaniseni uqeqesho. Baya kuthatha iindlela zokuqeqesha ezishiyekileyo ukusuka kwigumbi lokufundela ngqo ukuya kumaziko okudlala, ukuthumela umcebisi kwi-corridor yakho yokuhlangana. Nabani na ofuna umsebenzi oqaqambileyo ekunxibelelaneni, ukususela kwintshontshi ukuya kwiingcali banokufumana i-CCNA Certification evela kubo.
Ininzi inokuthi ibe neyona nto ingakumbi njengento eyongezelelekileyo kwizinto ezikhoyo kwilizwe elixhalabileyo kwaye ngokubhekiselele kumashishini axhumeneyo kubaluleke kakhulu ukuba kubekho into enjalo. Akukona nje isatifikethi esisebenza kodwa kunoko ukongeza ukufaneleka, imfundiso, ubuqhetseba, idatha kunye nokuqonda okuya kugcina phambili kwaye kusebenze kuzo zonke iimeko zokunxibelelana. Xa u-CCNA Certification ugqityiwe uyavunyelwa emazweni onke kungakhathaliseki ukuba yiyiphi intetho kunye neengcipheko zendawo. Nawe ujika kumthombo weedatha kunye neengcamango ezazisasazeka ekuzaleni ngokufanelekileyo aziyiyo nje inxaxheba yoluntu ekudaleni imibutho eyongezelelekileyo iya kunceda abantu abanxulumene nani nonke ngentlangano. Ukufezekisa i-CCNA Certification kukuba, nangona kunjalo, okweqile kakhulu kodwa iimveliso eziphilayo ezithwalayo ziyancwina kwaye ziya kukunika ithuba lokujongisisa zonke iingxaki. Kuthiwa akukho ncamango yolwazi malunga nokufezekiswa nangona kunjalo kwiindawo zokunxibelelana ngokuqinisekileyo kukho enye - yiyo yiCCNA Certification.